Umuvi elikhulu - ingozi enkulu
Omele elikhulu oda Hymenoptera kuyinto umuvi omkhulu, ngokuthi Hornet. lingakanani ifinyelela 5.5 cm ubude, futhi ingxenye ikhanda, etholakala ngemva kwamehlo olukhudlwana kunamanye ontanga. Lokhu ndlovu kunzima ukudida nabanye sibonga umbala egqamile futhi iphile: yellow head; pectoral ingxenye - omnyama; esiswini - ephuzi izilongotshane omnyama; futhi amaphiko luhlaza aphuzi ansundu. Ngezinye ukuphumula isinambuzane obunokuthula folds amaphiko ayo kanye umhlane wabheka ngempela ngokuthula. Futhi ungacabangi ukuthi phambi kwakho nomzingeli yangempela.
indawo yokwakha isidleke
Thanda lonke lamabutho, Hornet kungcono ukuhlala ehlathini emasimini agcwalise eyihlane. umuvi Big, kanye nozakwabo zayo, it is ekwakheni "isidleke lephepha", kepha okokusebenza ukuze kwakhiwe indawo yokuhlala yabo lisebenzisa akufani abanye abantu kwalesi silwane. Isisekelo izindlu kwakhona yizinkuni owonakele amagatsha abasha birch. Uthanda futhi uthole isiphetho sesikhashana elisophahleni lwendlu wakha izindlu zasemaphandleni futhi indlu ungakhululekile. Ezindaweni ezishisa kakhulu, yena uhlala "Izimpahla", ilenga esihlahleni.
Yini edla umuvi enkulu
Hornet - izinyo esabekayo amnandi futhi ke uncamela ukukufaka ekudleni impahla Ukudla, ecebile sucrose, okungukuthi isithelo, uju, amajikijolo, umpe, isihlahla ubisi. Akenzi makazidele, futhi esikhathini ayazika ukudla, ukudla nezibawu futhi horseflies. Nokho, le ozithandayo kakhulu dessert esihlwabusayo kuba Inyosi. Futhi ukondla izibungu zabo umuvi enkulu Ubamba izimpukane, izinyosi, futhi ngezinye izikhathi ngisho zazo siqu.
Hornet kuyinto ozakwabo lingandile kangako. Kodwa-ke kwaba sobala ukubukeka njalo lokhu isivakashi bengamenyiwe ku Cottages izindlu emzaneni. Izakhamuzi kabi ukucabanga ukuthi umnyovu esikhulu kuyingozi hhayi kuphela empilweni, kodwa ngezinye izikhathi ngisho nokuphila. Kukhona ubuchwepheshe efakazelwe kukho ukubhubha umuvi izidleke, eye yasetshenziswa isikhathi eside, noma akuvamile. Kodwa nale nomzingeli ukubhekana ngqo yingozi. Flying ngabanye nolaka, ukuvimbela ingozi uyeza, isebenzisa ama-pheromone wakhe (izinto odoriferous).
Uma wabhubhisa iminyovu, ungashiyi isidumbu phansi, ngoba iphunga layo ukuhlangana lonke uswebezane, okuyinto igcwele nemiphumela emibi ngendlela efanayo. Bites kwalesi sinambuzane kuba buhlungu kakhulu, zingabantu nobuthi obuyingozi kakhulu, futhi ukusabalala ushevu kulo umzimba ngokuphazima kweso. Uma kwabacasula ngumuntu umuvi lolu hlobo, kusayithi abathintekayo ngeke edema kweso ukuvuvukala kuvela, ephelezelwa ubuhlungu oyingozi. izimpawu ezivamile yilezi: ikhanda, palpitations, isiyezi okungazelelwe, ukuphefumula kanzima. Kukhona amacala ukushaqeka anaphylactic ngomphumela ebulalayo. Kunjalo, balimi othandekayo, musa engozini - uma etholakala endaweni yabo isidleke iminyovu sika, ngaleso sikhathi futhi ememeza Ochwepheshe.
I enkulu sa
Eningizimu-mpumalanga ye isiqhingi Sulawesi ngesikhathi uhambo ehlobo ngo-2011 wasebenza njengoba iqembu lososayensi. Babeye wathola umuvi enkulu, ebizwa Dalara Garuda yokudumisa uphawu lesizwe Indonesia - the Chimera wasenganekwaneni. Abesilisa wabantu ezindizayo hlobo iyafika 7 cm ubude futhi ube emihlathini omkhulu, okuyinto zinsale bezungeza Njengoba ivaliwe yonke inhloko inyosi. Nature endowed them njengoba "bezihlahla" ukuze azivikele izitha, ngoba kokuzalela lula nge nabesifazane, futhi Yiqiniso, ukuhlafuna ukudla. Uma isinambuzane azizwa ingozi ke ngokushesha Esigamekweni sokuqala yimpango yabo, kokushiya Ukulunywa ezijulile emzimbeni.
Amandla okuphulukisa Centella asiatica
Kanjani molting uhlobo lolwembu olunesihlungu?
Amazwe izungezwe nezinkinga zabo
Mushroom inkukhu - ukunambitheka engavamile
Niche plasterboard for amakhethini ngezandla zakhe
Transformer Electronic: wiring idayagramu
"Umbusi ehlathini": nabalingisi izindima
I-Rune World: Ukuhlukaniswa yi-runes, okusho ngendlela eqondile futhi eguquliwe
Isizini ngosawoti Utamatisi ungabuqeda nge aspirin: zokupheka ezithakazelisayo
Yekuchumana sendlela ukubeka Ilokhi ku "Ofunda nabo"
Amagilebhisi Crystal: incazelo kanye izici
Ubukhulu Russian: silwa futhi inyunyana
Hypertension 1 degree: izimpawu kanye nokwelashwa. zokuvimbela
Nokunye okufana nokolweni utamatisi no-anyanisi: zokupheka